‘Monhwɛ Yiye Na Obi Amfa Mo Nnommum’!—Kolosefo 2:8 | Ɔwɛn-Aban Adesua
ADESUA ASƐM 23
“Monhwɛ yiye: anhwɛ a obi de nyansapɛ ne nnaadaa hunu a egyina nnipa atetesɛm . . . so bɛfa mo nnommum.”​—KOL. 2:8.
DWOM 96 Onyankopɔn Asɛm Yɛ Akorade
1. Sɛnea Kolosefo 2:4, 8 kyerɛ no, ɔkwan bɛn na Satan pɛ sɛ ɔfa so fa yɛn adwene nnommum anaa ɔma yenya n’adwene no bi?
SATAN pɛ sɛ yɛsɔre tia Yehowa. Nea ɛbɛyɛ na watumi ayɛ saa no, ɔpɛ sɛ ɔsesa yɛn adwene wɔ sɛnea yesusuw nneɛma ho, kyerɛ sɛ, ɔpɛ sɛ yenya n’adwene no bi na yɛyɛ nea ɔpɛ. Wayɛ n’adwene sɛ ɔbɛfa nneɛma a yɛn ani gye ho so adɛfɛdɛfɛ yɛn anaa wadaadaa yɛn ama yɛadi n’akyi.—Kenkan Kolosefo 2:4, 8.
2-3. (a) Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yetie kɔkɔbɔ a ɛwɔ Kolosefo 2:8 no? (b) Dɛn na yebesusuw ho wɔ adesua yi mu?
2 Enti, ɛyɛ ampa sɛ Satan pɛ sɛ ɔdaadaa yɛn? Yiw, ɔpɛ sɛ ɔyɛ saa! Momma yɛnkae sɛ, ɛnyɛ nkurɔfo a wɔnsom Yehowa na Paulo kyerɛw asɛm a ɛwɔ Kolosefo 2:8 no kɔmaa wɔn. Mmom, Kristofo a na wɔde honhom kronkron asra wɔn na ɔkyerɛw kɔmaa wɔn. (Kol. 1:2, 5) Kristofo a na wɔwɔ asomafo no bere so no, sɛ na obi betumi adaadaa wɔn a, ɛnde yɛn bere yi so de yɛwɔ asiane kɛse mu pa ara. (1 Kor. 10:12) Adɛn nti na yɛreka saa? Seesei wɔaka Satan ahyɛ asase so, na ɔde asi n’ani so sɛ ɔbɛdaadaa Onyankopɔn asomfo anokwafo. (Adi. 12:9, 12, 17) Afei nso, bere a yɛte mu yi no, nnipa bɔne ne nnaadaafo rekɔ wɔn “anim wɔ bɔneyɛ mu.”—2 Tim. 3:1, 13.
3 Adesua yi mu no, yɛbɛhwɛ sɛnea Satan ayɛ n’adwene sɛ ɔbɛfa “nnaadaa hunu” so anya yɛn adwene. Yebehu Satan “nnɛɛdɛe” anaa n’akwan no mu mmiɛnsa. (Efe. 6:11) Afei, adesua a edi hɔ mu no, yɛbɛhwɛ sɛnea yebeyi nsusuwii bɔne biara a ebia n’akwan no ama yɛanya afi hɔ. Nanso, momma yenni kan nhwɛ ɔkwan a Satan faa so daadaa Israelfo no bere a woduu Bɔhyɛ Asase no so, na yɛnhwɛ nea yebetumi asua afi mu.
SATAN TWETWEE ISRAELFO NO MA WƆKƆSOM ABOSOM
4-6. Sɛnea Deuteronomium 11:10-15 kyerɛ no, bere a Israelfo kɔtenaa Bɔhyɛ Asase no so no, akwan foforo a wɔfa so yɛ mfuw bɛn na na ɛsɛ sɛ wosua?
4 Satan faa anifere kwan so sɔɔ Israelfo no hwɛe sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛma wɔasom abosom. Ɔyɛɛ no sɛn? Ohui sɛ Israelfo no hia aduan, enti ɔyɛɛ n’adwene sɛ ɔbɛfa so asɔ wɔn ahwɛ. Bere a Israelfo no duu Bɔhyɛ Asase no so no, na ɛsɛ sɛ wɔfa akwan foforo so yɛ wɔn mfuw. Bere a Israelfo no wɔ Egypt no, na Nil asubɔnten no mu nsu na na wɔde gugu wɔn mfuw so. Nanso Bɔhyɛ Asase no so de, na ɛnyɛ asubɔnten kɛse mu nsu na wɔde yɛ mfuw, na mmom na wɔde osu a ɛtɔ ne obosu na egugu wɔn mfuw so. (Kenkan Deuteronomium 11:10-15; Yes. 18:4, 5) Enti, na ɛsɛ sɛ Israelfo no sua akwan foforo a wɔbɛfa so ayɛ wɔn mfuw. Ná Israelfo a wonim sɛnea wɔyɛ mfuw no mu dodow no ara awuwu wɔ sare no so, enti na ɛrenyɛ mmerɛw mma wɔn.
Ɛyɛɛ dɛn na Satan tumi sesaa Israelfo a na wɔyɛ akuafo no adwene? (Hwɛ nkyekyɛm 4-6) *
5 Yehowa ka kyerɛɛ ne nkurɔfo sɛ nneɛma asesa wɔ wɔn asetena mu. Afei, ɔde kɔkɔbɔ bi maa wɔn. Wohwɛ asɛm no nea edi kan a, ebia ɛbɛyɛ wo sɛ ɛmfa afuwyɛ ho. Yehowa kaa sɛ: “Monhwɛ yiye na biribiara antwetwe mo koma na moankɔsom anyame foforo ankotow wɔn.” (Deut. 11:16, 17) Adɛn nti na Yehowa bɔɔ wɔn kɔkɔ wɔ abosonsom ho, bere a na ɔreka akwan foforo a wɔbɛfa so ayɛ wɔn mfuw ho asɛm?
6 Ná Yehowa nim sɛ anhwɛ a biribi bɛtwetwe Israelfo no ama wɔakosua akwan a abosonsomfo a wɔatwa wɔn ho ahyia no fa so yɛ wɔn mfuw no bi. Nokwasɛm ne sɛ, na aman a atwa Israelfo no ho ahyia no mufo nim mfuw yɛ sen Israelfo no koraa. Enti, na Onyankopɔn nkurɔfo betumi asua afuwyɛ ho biribi afi wɔn hɔ, nanso na asiane bi wɔ hɔ. Ná Kanaan akuafo no som Baal, na na Baalsom agye wɔn adwene. Ná wogye di sɛ Baal na ɔwɔ wim so tumi, na ɔno na ɔma osu tɔ. Ná Yehowa mpɛ sɛ ne nkurɔfo begye gyidihunu a ɛte saa adi. Nanso, Israelfo no kɔsom Baal mpɛn pii. (Num. 25:3, 5; Atem. 2:13; 1 Ahe. 18:18) Afei, hwɛ sɛnea Satan tumi faa Israelfo no nnommum, anaa ɔma wonyaa n’adwene no bi.
AKWAN MMIƐNSA A SATAN NAM SO FAA ISRAELFO NNOMMUM
7. Bere a Israelfo no duu Bɔhyɛ Asase no so no, wɔn gyidi ho sɔhwɛ bɛn na wohyiae?
7 Ɔkwan a edi kan a Satan de yɛɛ adwuma ne sɛ, ɔfaa nneɛma a na Israelfo pɛ so twetwee wɔn. Ná Israelfo no pɛ sɛ osu tɔ gu wɔn asase no so. Afe biara, efi April awiei kosi September no, na osu ntaa ntɔ wɔ Bɔhyɛ Asase no so. Sɛ Israelfo no betumi atena nkwa mu na wɔanya nnuan pii a, na egyina osu a na ɛtaa fi ase tɔ wɔ October mu no so. Satan daadaa Israelfo no ma wonyaa adwene sɛ, sɛ nneɛma bɛkɔ yiye ama wɔn a, na ɛsɛ sɛ wosuasua abosonsomfo a wɔatwa wɔn ho ahyia no. Ná saa abosonsomfo yi gye di sɛ, ɛsɛ sɛ wɔyɛ amanne bi ansa na wɔn anyame no ama osu atɔ. Israelfo a na wonni Yehowa mu gyidi no nyaa adwene sɛ, nea ɛbɛyɛ na ɔpɛ si a ɛrenkyɛ no, gye sɛ wɔyɛ amanne ma abosom no. Enti, wɔyɛɛ abosonsomfo amanne de hyɛɛ atoro nyame Baal anuonyam.
8. Dɛn ne ɔkwan a ɛto so mmienu a Satan de yɛɛ adwuma? Kyerɛkyerɛ mu.
8 Satan de ɔkwan a ɛto so mmienu yɛɛ adwuma wɔ Israelfo no so. Ɔfaa akɔnnɔ bɔne so twetwee wɔn. Ná aman a wɔsom abosom no de wɔn ho hyɛ ɔbrasɛe a ɛyɛ tan mu de som wɔn anyame. Ɔsom a ɔbrasɛe ahyɛ no mã saa mu no, na mmea ne mmarima nyinaa si tuutuu wɔ wɔn asɔrefie hɔ. Ɛnyɛ sɛ na saa abosonsomfo no ma mmarima a wɔne mmarima da ne mmea a wɔne mmea da ne ɔbrasɛe foforo ho kwan kɛkɛ, na mmom na wogye tom! (Deut. 23:17, 18; 1 Ahe. 14:24) Ná abosonsomfo no gye di sɛ, sɛ wɔyɛ saa amanne no a, na ɛma wɔn anyame no hyira wɔn asase no ma wonya nnuan pii. Abosonsomfo no amanne a na ɔbrasɛe wom no twetwee Israelfo bebree, na wɔma ɛdaadaa wɔn ma wɔkɔsom atoro anyame. Yɛbɛka pa ara a, na Satan afa wɔn nnommum anaa wɔanya Satan adwene.
9. Sɛnea Hosea 2:16, 17 ka no, sɛn na Satan maa Israelfo no werɛ fii sɛnea Yehowa te ankasa?
9 Satan de ɔkwan a ɛto so mmiɛnsa yɛɛ adwuma. Ɔmaa Israelfo no werɛ fii sɛnea Yehowa te ankasa. Odiyifo Yeremia bere so no, Yehowa kaa sɛ “Baal nti,” atoro adiyifo no maa ne nkurɔfo werɛ fii ne din. (Yer. 23:27) Ɛbɛyɛ sɛ Onyankopɔn nkurɔfo gyaee Yehowa din bɔ, na wɔde Baal din a ɛkyerɛ ‘Owura’ sii ananmu. Wei ma ɛyɛɛ den sɛ Israelfo no behu nsonsonoe a ɛda Yehowa ne Baal ntam. Enti ɛma ɛyɛɛ mmerɛw maa wɔn sɛ wɔde amanne a wɔyɛ wɔ Baal som mu bɛfrafra Yehowa som mu.—Kenkan Hosea 2:16, 17 ne ase hɔ asɛm.
AKWAN A SATAN FA SO DAADAA NKURƆFO NNƐ
10. Akwan bɛn na Satan fa so daadaa nkurɔfo nnɛ?
10 Akwan a Satan de yɛɛ adwuma tete no, ɛno ara na ɔde yɛ adwuma nnɛ. Nea Satan de nya nkurɔfo ni. Ɔfa nneɛma a nnipa pɛ so twetwe wɔn, ɔma aguamammɔ bɛyɛ te sɛ nea asɛm biara nni ho, na afei ɔma nkurɔfo werɛ fi sɛnea Yehowa te ankasa. Momma yenni kan nhwɛ sɛnea Satan ma nkurɔfo werɛ fi sɛnea Yehowa te ankasa.
11. Dɛn na Satan ayɛ a ama nkurɔfo werɛ afi sɛnea Yehowa te ankasa?
11 Satan ma nkurɔfo werɛ fi sɛnea Yehowa te ankasa. Yesu asomafo no wu akyi no, nkurɔfo bi a wɔkyerɛ sɛ wɔyɛ Kristofo fii ase trɛw atoro nkyerɛkyerɛ mu. (Aso. 20:29, 30; 2 Tes. 2:3) Saa awaefo no ma ɛyɛɛ den maa nkurɔfo sɛ wobehu nokware Nyankopɔn koro no. Nea wɔyɛe no bi ni. Woyii Onyankopɔn din fii wɔn Bible ahorow mu, na wɔde abodin te sɛ “Awurade” sii ananmu. Esiane sɛ woyii Onyankopɔn din fii wɔn Bible mu na wɔde abodin “Awurade” sii ananmu nti, wɔma ɛyɛɛ den maa nkurɔfo sɛ, sɛ wɔkenkan Bible a wobehu nsonsonoe a ɛwɔ Yehowa ne “awuranom” a wɔaka wɔn ho asɛm wɔ Kyerɛwnsɛm mu no mu. (1 Kor. 8:5) Wɔfrɛɛ Yehowa ne Yesu nyinaa “Awurade.” Enti, ɛyɛɛ den maa nkurɔfo sɛ wobehu sɛ ɛsono Yehowa ɛnna ɛsono Yesu. (Yoh. 17:3) Onyankopɔn din a woyi fii Bible mu no ka ho bi na Baasakoro nkyerɛkyerɛ no bae. Saa nkyerɛkyerɛ no nni Onyankopɔn Asɛm mu. Wei nti, nnipa pii adwene yɛ wɔn sɛ yɛrentumi nhu Onyankopɔn. Saa asɛm no yɛ atoro ankasa!—Aso. 17:27.
Sɛn na Satan afa atoro som so akanyan akɔnnɔ bɔne? (Hwɛ nkyekyɛm 12) *
12. Dɛn na atoro som ahyɛ ho nkuran, na sɛnea Romafo 1:28-31 ka no, dɛn na ɛde aba?
12 Satan fa akɔnnɔ bɔne so twetwe nkurɔfo. Tete Israel no, Satan faa atoro som so hyɛɛ ɔbrasɛe ho nkuran. Ɛnnɛ nso, saa ara na ɔyɛ. Atoro som gye ɔbrasɛe tom, na ɛhyɛ ho nkuran mpo. Enti, nnipa pii a wɔkyerɛ sɛ wɔsom Onyankopɔn no mfa n’akwankyerɛ a emu da hɔ no mmɔ wɔn bra. Ɔsomafo Paulo kaa nea afi mu aba no ho asɛm wɔ krataa a ɔkyerɛw kɔmaa Romafo no mu. (Kenkan Romafo 1:28-31.) “Nneɛma a ɛnsɛ” a Paulo kaa ho asɛm no, ebi ne aguamammɔ biara; mmarima a wɔne mmarima da ne mmea a wɔne mmea da nso ka ho. (Rom. 1:24-27, 32; Adi. 2:20) Ehia pa ara sɛ yetie Bible nkyerɛkyerɛ a emu da hɔ no!
13. Ɔkwan foforo bɛn na Satan de yɛ adwuma?
13 Satan fa nneɛma a yɛpɛ so twetwe yɛn. Yɛpɛ sɛ yenya nimdeɛ anaa yesua adwuma bi a ɛbɛboa yɛn ama yɛatumi ahwɛ yɛn ho ne yɛn mmusua. (1 Tim. 5:8) Mpɛn pii no, sɛ yɛkɔ sukuu na yɛyere yɛn ho sua ade a, ɛnna yebetumi anya saa nimdeɛ no. Nanso, ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yiye. Aman pii so no, sukuufo sua ade nya nimdeɛ a mfaso wɔ so, nanso wosua wiase nyansa ka ho. Ɛho nhwɛso ni. Wɔkyerɛkyerɛ sukuufo no ma wonya adwene sɛ Onyankopɔn nni hɔ, na ɛma wobu Bible animtiaa. Wɔka kyerɛ sukuufo no sɛ nnipa a wonim nyansa nyinaa gye di sɛ nkwa fi adannandi mu. (Rom. 1:21-23) Nkyerɛkyerɛ a ɛte saa ne “Onyankopɔn nyansa” nhyia.—1 Kor. 1:19-21; 3:18-20.
14. Dɛn na nnipa nyansa hyɛ ho nkuran?
14 Nnipa nyansa sɔre tia Yehowa akwankyerɛ, na ɛmfa nyɛ hwee. Ɛnhyɛ nkurɔfo nkuran mma wɔnsow Onyankopɔn honhom no aba, na mmom ɛma wɔyɛ “ɔhonam nnwuma.” (Gal. 5:19-23) Ɛma nkurɔfo yɛ ahantan ne ahomaso, na ɛma wɔbɛyɛ “ahopɛ.” (2 Tim. 3:2-4) Onyankopɔn pɛ sɛ n’asomfo brɛ wɔn ho ase, nanso saa suban ahorow yi ne ahobrɛase nhyia. (2 Sam. 22:28) Kristofo binom a wɔakɔ sukuupɔn anya wiase adwene sen sɛ anka wobenya Onyankopɔn adwene. Yenya wiase adwene a ɛte saa a, nea ebetumi de aba no, momma yɛnhwɛ emu baako pɛ.
Sɛn na nnipa nyansa betumi asɛe yɛn adwene? (Hwɛ nkyekyɛm 14-16) *
15-16. Dɛn na wusua fi onuawa bi asɛm mu?
15 Onuawa bi a ɔde bɛboro mfe 15 ayɛ bere nyinaa som adwuma kaa sɛ: “Meyɛ Ɔdansefo a mabɔ asu. Ná makenkan asiane ahorow a ɛwɔ sukuupɔn a obi bɛkɔ mu, na na mate bi nso. Nanso, mantie kɔkɔbɔ a ɛte saa no nyinaa. Ɛyɛɛ me sɛ afotu no mfa me ho.” Ɔhaw ahorow bɛn na ohyiae? Onuawa no kaa sɛ: “Sukuupɔn adesua no gyee me bere, na na ɛma mebrɛ pa ara, enti na minnya bere mpo mmɔ Yehowa mpae sɛnea bere bi na meyɛ no. Ná mebrɛ araa ma na mintumi ne afoforo mmɔ Bible ho nkɔmmɔ. Afei nso, ɔbrɛ nti na mintumi nsua ade yiye ansa na makɔ asafo nhyiam. Anigyesɛm ne sɛ, bere a m’ani baa me ho so sɛ sukuupɔn adesua a mede me ho ahyɛ mu no resɛe me ne Yehowa abusuabɔ no, mihui sɛ ɛsɛ sɛ migyae sukuu no, na migyaee.”
16 Saa nhomasua a ɛkɔ akyiri no kaa onuawa yi nsusuwii sɛn? Ɔkaa sɛ: “Ɛyɛ me aniwu sɛ mɛka sɛ nhoma a mikosuae no maa mede m’adwene sii afoforo sintɔ so, titiriw, me nuanom Kristofo. Ná nea wɔyɛ biara nsɔ m’ani, na na me ne wɔn mmɔ. Ɛkyɛe pa ara ansa na meretumi asesa m’adwene. Saa asɛm yi ma mihui sɛ kɔkɔbɔ a yɛn soro Agya no nam n’ahyehyɛde no so de ma yɛn no, sɛ yebu yɛn ani agu so a, ɛyɛ hu pa ara. Yehowa nim me sen sɛnea m’ankasa minim me ho. Mitiee Yehowa a, anka mamfa ɔhaw yi mu!”
17. (a) Dɛn na ɛsɛ sɛ yɛde si yɛn ani so? (b) Dɛn na yebesusuw ho wɔ adesua a edi hɔ no mu?
17 Ɛsɛ sɛ wode si w’ani so sɛ woremma Satan wiase no “nyansapɛ ne nnaadaa hunu” mmfa wo nnommum da. Mma Satan nnaadaa wo da. (1 Kor. 3:18; 2 Kor. 2:11) Mma Satan nnaadaa wo mma wo werɛ mmfi sɛnea Yehowa te ankasa. Kɔ so fa Yehowa akwankyerɛ bɔ wo bra. Afei nso, mma Satan nnaadaa wo mma wummu w’ani ngu Yehowa afotu so. Nanso, sɛ wuhu sɛ woanya wiase yi adwene no bi dedaw a, dɛn na ɛsɛ sɛ woyɛ? Sɛ nsusuwii ne suban bi “agye ntini” wɔ yɛn mu mpo a, adesua a edi hɔ no bɛkyerɛ yɛn sɛnea Onyankopɔn Asɛm betumi aboa yɛn ama yɛatutu agu.—2 Kor. 10:4, 5.
AKWAN BƐN NA SATAN FA SO . . .
ma nkurɔfo werɛ fi sɛnea Yehowa te ankasa?
ma akɔnnɔ bɔne twetwe nkurɔfo?
ma nneɛma a yɛpɛ twetwe yɛn?
^ nky. 5 Satan aben wɔ nnaadaa mu. Wadaadaa nnipa pii ama wɔanya adwene sɛ wɔwɔ ahofadi, nanso nokwasɛm ne sɛ Satan afa wɔn nnommum anaa ɔde wɔn ayɛ nkoa. Adesua yi mu no, yebehu akwan bi a Satan fa so daadaa nkurɔfo.
^ nky. 48 MFONI HO NKYERƐKYERƐMU: Israelfo de wɔn ho abɔ Kanaanfo ama wɔretwetwe wɔn akɔ Baal som ne aguamammɔ mu.
^ nky. 51 MFONI HO NKYERƐKYERƐMU: Asɔre bi rebɔ dawuru sɛ egye ɔbarima ne ɔbarima nna ne ɔbea ne ɔbea nna tom.
^ nky. 53 MFONI HO NKYERƐKYERƐMU: Onuawa ababaa bi kɔ sukuupɔn. Ɔbenfo bi a ɔkyerɛ onuawa no ne ne sukuufo ade ama wɔagye adi sɛ nyansahu ne mfiridwuma ho nimdeɛ na ebetumi ayi adesamma haw nyinaa afi hɔ. Akyiri yi, onuawa no wɔ Ahenni Asa so; nea ɛrekɔ so biara mfa ne ho, na nea anuanom yɛ biara nsɔ n’ani.